Xildhibaan Dalxa oo sheegay in Is Casilaada Jawaari Howlihii Barlamaanka dib u dhib u dha aysan u keenayn – Radio Daljir
Xildhibaan Dalxa oo sheegay in Is Casilaada Jawaari Howlihii Barlamaanka dib u dhib u dha aysan u keenayn
Abriil 16, 2018 3:59 g 0
Kadib casilaadii gudoomiyihii golaha shacabka Maxamed Shiikh Cusman jawaari , oo si rasmi ah u xaqiijiyay isbuucii tagay inuu iskaga tagay xilkii afhayeenimo.
kadib muddo ku dhaw bil oo ay xildhibaanada Golaha Shacabka ku kala qaybsanaayeen mooshin laga keenay, maalmihii udambeeyay waxa ay arrintu isu badashay hadal hayanta su’aalaha laxiriira waxa xigi doona iscasilaadiisa iyo cidda laga yaabo inay shaqada kabadasho,kuwaas oo ay aad isu waydiinayeen qaybaha kala duwan ee bulshada rayidku.
15; maalmood oo ka bilaabanaysa maalinkii uu iscasilaadda kudhawaaqay gudoomiyihii hore ayaa looga baahanyahay golaha shacabka inay kusoo doortaan qofkii noqon lahaa afhayeenka xiga, kaasoo laga sugi doono shaqooyin waawayn sida maareynta baarlamaanka, kasbashada kalsoonida shacabka iyo inuu la shaqeeyo Madaxweynaha iyo Ra’isul Wasaaraha howshaas oo ahayd mid aan sahlaneyn marka dib loo fiirsho dawladihii is xigxigay.
Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari waa 73; jir , sanadkii 1982 kii ayuu ka qalin jabiyey kulliyadda Qaanuunka ee Jaamacadii Ummadda Soomaaliyeed, xiligaas kahor waxa uu qaatay shahaado macalinimo oo luuqadda Ingiriiska iyo mid laxirirta sharciga Islaamka ah, wixii intaa kadambeeyayna waxa uu hay’adaha sharciga qaabilsan la shaqaynayay muddo aad udheer ilaa uu mudooyinkii dambe noqday shakhsi ixtiraam gaar ah lagu siiyo aqoontiisa arimaha sharciga ku saabsan , dad badan ayaa aaminsan in badalidda gudoomiye noocaas ah aysan ahayn talaabo fiican, haddana mar hadayba dhacday barlamanku shaqadiisa si lamid ah sidii hore ma usii wadi karaan, saamaynse bixintaanka jawaari maku yeelankartaa hawlihii socday iyo kuwii laqorsheeyay in kalfadhigan 3aad gudihiisa lagu dhameeyo.
Arrimahas Waxaa Maanta ka hadlay Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo kamid ah xildhibaanada Barlamaanka Somaaliya ,isago sheegay in Marnaba aysan dartiis u joogsan doonin howlihii Barlamaanka.
Mandheera Lix Qof aya la badbaadiyeey kadib Marki uu daad la tagay